Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.3.1 Netflix Loka
Ny Loka Netflix mampiasa misokatra antso mba mialoha izay sarimihetsika ny olona ho tia.
Ny tetikasa antso an-telefaona malalaka dia ny loka Netflix. Netflix dia orinasa mpitrandraka fandraketana an-tserasera, ary tamin'ny 2000 dia natomboka ny Cinematch, tolotra iray hanehoana filma amin'ny mpanjifa. Ohatra, Cinematch dia mety manamarika fa nahafinaritra ny Star Wars sy The Empire Strikes Back ary avy eo dia manoro hevitra anao hijery ny Fiverenan'ny Jedi . Tamin'ny voalohany dia niasa ratsy i Cinematch. Saingy, nandritra ny taona maro, nanohy nanatsara ny fahaizan'izy ireo naminavina ny mety ho fialam-boly mpividy. Tamin'ny taona 2006 anefa, ny fandrosoana tamin'ny Cinematch dia nipoitra. Ireo mpikaroka ao amin'ny Netflix dia nanandrana fatratra ny zavatra rehetra mety hoeritreretiny, kanefa, koa izy ireo dia niahiahy fa misy hevitra hafa mety hanampy azy hanatsara ny rafitra. Noho izany, tonga izy ireo tamin'ny zavatra izay, tamin'izany fotoana izany, vahaolana radikal: antso an-kalamanjana.
Ny maha-zava-dehibe ny fahombiazan'ny loka Netflix dia ny fomba nanombohana ny antso an-kalamanjana, ary ity lesona ity dia manana lesona manan-danja amin'ny fomba azo ampiasaina amin'ny fikarohana sosialy. Netflix dia tsy nametraka fotsiny fangatahana tsy nahazoana alalana ho an'ny hevitra, izay heverin'ny olona maro fa rehefa heverina ho antso an-kalalahana izy ireo. Nametraka fanamby mazava i Netflix tamin'ny fombafomba fanombanana tsotra: izy ireo dia nanohitra ny olona hampiasa andian-tsarimihetsika 100 tapitrisa mba haminavina ny isa 3 tapitrisa (fanombanana nataon'ireo mpampiasa fa tsy namoaka i Netflix). Ny olona voalohany namorona algorithm iray izay naminavina ny isa 3 tapitrisa navoaka 10% tsaratsara kokoa noho i Cinematch dia hahazo dolara tapitrisa. Ity mazava sy mora amin'ny fampiharana ny paikady fanamarinana-mampitaha ny fanombatombana ny fanombanana amin'ny fanombanana ny fanombanana dia midika fa ny loka Netflix dia noforonina tamin'ny fomba toy izany fa mora kokoa ny manamarina ny vahaolana fa tsy mamokatra; Nanjary sarotra ny nanatsara ny Cinematch ho olana ho an'ny antso misokatra.
Tamin'ny volana oktobra 2006, i Netflix dia namoaka daty iray ahitana mpilalao sarimihetsika 100 tapitrisa avy amin'ny mpanjifa manodidina ny 500.000 (hijerentsika ny fiantraikan'ny tsiambaratelo momba an'io tahiry io ao amin'ny toko 6). Ny dataflatin'i Netflix dia azo raisina ho toy ny lehibe matrice izay mpanjifa manodidina ny 500,000 amin'ny filma 20,000. Ao anatin'io mari-pahaizana io, dia misy 100 tapitrisa isan-tsegondra eo amin'ny isa iray amin'ny kintana iray ka hatramin'ny dimy (tabilao 5.2). Ny fanamby dia ny fampiasana ny angon-drakitra voatazona ao amin'ny matrix mba haminavina ny isa 3 tapitrisa voafantina.
Tabilao 5.2: Famaritana ny data avy amin'ny loka Netflix
Ireo mpikaroka sy ireo mpihetraketraka manerana izao tontolo izao dia nisedra ny fanamby, ary tamin'ny 2008 dia olona maherin'ny 30.000 no niasa tamin'izany (Thompson 2008) . Nandritra ny fifaninanana dia nahazo vahaolana mihoatra ny 40.000 avy amin'ny ekipa maherin'ny 5.000 i (Netflix 2009) . Mazava ho azy, Netflix dia tsy afaka namaky sy nahatakatra ireo vahaolana naroso rehetra. Ny zava-drehetra dia nihazakazaka tamim-pahombiazana, satria ny vahaolana dia mora hita. Netflix dia afaka manana ordinatera hampitaha ny fanombatombana voambara miaraka amin'ny valim-pitsanganana voamarina amin'ny fampiasana metric voafaritra (ny metric manokana ampiasain'izy ireo dia ny fototry ny fahadisoana). Izany fahaizana izany dia nanombana haingana ireo vahaolana izay nahatonga an'i Netflix hanaiky ny vahaolana avy amin'ny tsirairay, izay hita fa manan-danja satria hevitra tsara avy amin'ny toerana mahagaga. Raha ny marina, ny vahaolana nahazo vintana dia natolotry ny ekipa iray novokarin'ny mpikaroka telo izay tsy nahitana ny fahazoan-dàlana fanorenana fahitalavitra (Bell, Koren, and Volinsky 2010) .
Ny endrika tsara tarehin'ny loka Netflix dia nahatonga ny vahaolana rehetra omen-danja hotsaraina ara-drariny. Izany hoe, raha nampakatra ny isan'ireo nomeraon-tsivana ny olona, ​​dia tsy nila nandefa ny mari-pahaizana momba ny fianarana izy ireo, ny taonany, ny hazakazaka, ny lahy sy ny vavy, ny fironana ara-pananahana, na ny zavatra hafa momba azy ireo. Ny fanombatombana nasehon'ny profesora malaza iray avy any Stanford dia noraisina toy ny an'ireo zatovo tao amin'ny efitranony. Mampalahelo fa tsy marina izany amin'ny fikarohana ara-tsosialy maro. Izany hoe, ho an'ny ankamaroan'ny fikarohana ara-tsosialy, dia tena mandany fotoana be ny fanombanana ary eo ampelatanana. Noho izany, ny ankamaroan'ny fikarohana momba ny fikarohana dia tsy voamarina ara-drariny na tsia, ary rehefa voavaly ny hevitra dia sarotra ny manaisotra ireo fanombanana avy amin'ny mpamorona ireo hevitra. Ny tetikasa fanokafana an-tsokosoko, etsy ankilany, dia manana fanombatombana mora sy ara-drariny mba hahafahan'izy ireo mahita hevitra izay tsy dia ho hita loatra.
Ohatra, amin'ny fotoana iray mandritra ny loka Netflix, misy olona manana ny anarana hoe Simon Funk dia namoaka vahaolana naroso teo amin'ny bilaoginy izay mifototra amin'ny famoizana sarobidy tokana, fomba iray avy amin'ny alàlan'ny linear izay tsy nampiasan'ny mpandray anjara teo aloha. Ny lahatsoratry ny bilaogy Funk dia sady tsy ara-teknika no tsy ara-dalàna. Moa ve ity lahatsoratra am-bilaogy ity dia mamaritra vahaolana tsara na fotoana fohy? Ankoatry ny tetikasa fanokafana, ny vahaolana dia mety tsy nahazo valiny lehibe mihitsy. Raha ny marina dia tsy mpampianatra tao amin'ny MIT i Simon Funk; Izy dia mpandrindra rindrambaiko izay tamin'izany fotoana izany dia namakivaky an'i Nouvelle Zélande (Piatetsky 2007) . Raha nandefa mailaka an'io hevitra io ho an'ny injeniera iray ao amin'ny Netflix izy, dia azo antoka fa tsy novakiana izany.
Soa ihany fa, noho ny fepetra fanamarinana mazava sy mora nampiharina, dia novalian-tsoa ny fanombatombana novinavinaina, ary mazava ho azy fa tena mahery vaika ny fomba fiasany: nipoitra tamin'ny toerana fahefatra amin'ny fifaninanana izy, vokatra goavana noho ny efa nataon'ireo ekipa hafa miasa mandritra ny volana amin'ny olana. Farany, ny ampahany amin'ny fomba fiasany dia nampiasa azy ireo tamin'ny mpifaninana matotra rehetra (Bell, Koren, and Volinsky 2010) .
Ny zavatra nananan'i Simon Funk hanoratra lahatsoratra bilaogy manazava ny fomba fiasany, fa tsy miezaka ny mitazona izany miafina, dia mampiseho ihany koa fa maro tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny loka Netflix no tsy nandrisika ny loka tapitrisa dolara. Etsy ankilany kosa dia maro ireo mpandray anjara no toa nankafy ny fanamby ara-tsaina sy ny fiarahamonina izay namolavola ny olana (Thompson 2008) , fahatsapana izay antenain'ny mpikaroka marobe.
Ny loka Netflix dia ohatra tsotra amin'ny antso an-kalamanjana. Netflix dia nametraka fanontaniana tamin'ny tanjona iray manokana (manambara ny sarimihetsika sarimihetsika) sy ny vahaolana voavolavola avy amin'ny olona maro. Netflix dia afaka nanombantombana ireo vahaolana rehetra ireo satria mora kokoa ny manamarina fa tsy mamorona, ary farany i Netflix dia nahazo ny vahaolana tsara indrindra. Avy eo, hasehoko anao ny fomba hampiasana ity fomba ity amin'ny biôlôjia sy ny lalàna, ary tsy misy loka iray tapitrisa dolara.